Indhacadde: Puntland ma aha in Dowladda a ku eedeyso in ay shabaab Xiriir la leedahay. “akhriso” – Gedo Times
Indhacadde: Puntland ma aha in Dowladda a ku eedeyso in ay shabaab Xiriir la leedahay. “akhriso”
16th March 2016 admin Wararka Maanta 1
“Waxyaabaha qaar in la isku riix riixo ma ahan, waa maqlayay hadalka Wasiirka Amniga Puntland, waxay cadawga u noqoneysaa gacan iyo gar, Shabaab dowladda Soomaaliyeed waa laayeen, dadka Koofureedna waa laayeen, Puntland asxaan uma hayaan, waa in meel looga soo wada jeesto”.
Mudane Indha Cadde ayaa sheegay in Maamulada dalka ka jira ay isku mid u yihiin Al-Shabaab, waxaana uu ku baaqay in laga shaqeeyo, sidii looga hortagi lahaa, waxaana si gaar ah Puntland ugu baaqay in Galmudug oo deris la ah ay iska kaashadaan la dagaalanka Shabaab.
Dhageyso: Nuur Sayax oo sheegay in Qof ku eedeysan Qarixii dhawaan ka dhacay Magaalada Garbaharay ay gacanta ku hayaan.
Dhageyso: Al-shabaab oo Madax Furasho ku siidaayay Shaqaale ka tirsan Bisha-Cas oo ay Ku Afdubten Duledka Bar dhere